Thaïlandy : Songkran Mainty · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Aogositra 2018 13:26 GMT
Songkran, ny fetin'ny taombaovao Thaï, izay ankalazaina ny 13 ka hatramin'ny 15 Aprily dia matetika no fotoana iray feno fifaliambe ao Thaïlandy. Antsoina hoe “Songkran mainty” ny Songkran amin'ity taona ity nanomboka tamin'ny nisian'ilay fifandonana teo amin'ny miaramila sy ireo mpanao hetsipanoherana ny fitondrana ankehitriny. Roa ireo mpanao fihetsiketsehana no maty, ary an-jatony ireo naratra nandritra ilay fifandonana teny amin'ny lalamben'i Bangkok.
Hoy i Richard Barrow nanoratra [amin'ny teny anglisy, toy ireo blaogy rehetra voalaza ato] :
Tena andro mainty ho an'ireo Thailandey tokoa. Ara-bakiteny : miaraka amin'ny setroka mainty avy amin'ireo kodiarana nodorana, toy ny hoe ilay tanàna mihitsy no may. Tokony ho androm-piravoana anio, fiandohan'ny taombaovao Thailandey.
Iza no nanomboka ? Araka ny lahatsary sy ny sary hita, ary ny fitantarana re, samy tompon'andraikitra tamin’ io korontana io ny andaniny roa. Raha te-hijery ny lisitra fenon'ireo sary sy lahatsary momba ireo Lobaka Mena, jereo ny The Red Shirt Report. Nirmal Ghosh, mpanao gazety, no manome famintinana ny hetsika rehetra tao Bangkok nandritra izay andro roa farany izay.
Mitaky ny fametraham-pialan'ny Praiministra Abhisit Vejjajiva ireo Lobaka Mena, satria heverin'izy ireo fa tamin'ny fomba tsy ara-dalàna no nahatongavany teo amin'io toerany io. Maro amin'izy ireo no manohana ny Praiministra taloha, Thaksin Shinawatra.
Voampanga ho mampiasa teknikan'ny ady anaty akata an-tanandehibe ireo lobaka mena hakàny fahefana eny andalam-be. Nandoro fiara fitanterana natao ho an'ny daholo be sy nitoraka “cocktails Molotov” tamin'ireo miaramila ireo mpanao fihetsiketsehana. Manoloana azy ireo, nitifitra an'ireo mpitolona tonga an-tànam-polo kosa ny miaramila.
Indreto ireo lahatsary tanaty Youtube, mampiseho ny fomba nakàn'ireo mpanao fihesiketsehana ny tanky izay naparitaka rehefa namoaka ny fanambaràna ny tany misy hotakotaka ny governemanta.
Ity lahatsary manaraka ity dia nasehon'ireo mpanakiana ny lobaka mena ho porofo hoe izy ireo no nahatonga ny herisetra.
Nanamarika ny Oniversitera Thailandey, Ji Giles Ungpakorn, izay mialokaloka any Londona, fa “tsy misy governemanta, n'aiza n'aiza manerana izao tontolo izao, afaka hampiasa ny hery mitam-piadiany hitifitra mpanao fihetsiketsehana eny an-dalàmbe.” Nampiany koa hoe fanehoana ny “fitomboana tsy mitsahatry ny tolon'ireo vondrom-piarahamonina” ao anatin'ny fiarahamonina thaï io krizy ao Thailandy io.
….fanin'efany izao tanatin'ny efatra taona, no nitifitra mpanao fihetsiketsehana manohana ny demokrasia ao Bangkok ireo miaramila. Nitovy foana ny tanjona tanatin'izany rehetra izany : fiarovana ny tombotsoan'ireo mpitondra ambony mpitàna ny nentim-paharazana izay mitantana ao Thailandy nandritry ny 70 taona.
…ady eo amin'ireo sarangam-piarahamonina, ady eo amin'ny mahantra sy ny mpitondra ambony efa antitra, no hitantsika ao thailandy nanomboka ny faran'ny taona 2005.
Araka ny efa novinavinain'ny maro, noraisin’ireo Lobaka Mavo ho toy ny fiotrehana zavatra mahatsiravina ny fihetsik'ireo rafiny, dia ireo Lobaka Mena izany :
Taorian'ny fanakorontanana ny fivorian'ny ASEAN tao Pattaya, nanomboka ny hetsika fampihorohoroana mamaivay tany amin'ireo faritra maro manandanja tao Bangkok iroe Lobaka Mena, ka nahatonga an'i Abhisit hanao fanambaràna ny tany misy latsaka an-katerena. Avy eo dia nantsoina ny miaramila hamotika ny fihetsiketsehan'ireo Lobaka Mena. Amin'ny fotoana amotehan'ny miaramila ireo fihetsiketsehana, hiraradraraka ny rà ary tsy ho voafehy intsony ny toe-draharaha, ary dia ho tonga ny fanjakan'i Baroa.
Ilay fivoriana antampony tao Azia no tiana ambara eto, izay nofoanana rehefa nobodoin'ireo Lobaka Mena ny hotely tokony handraisana izany.
Nanakiana ny andaniny roa i Nganadeeleg : na ny governemanta, na ireo Lobaka Mena :
Toa tsy mahavita miaiky ny hadisoan'ny mpikambana ao aminy ny andaniny sy ny ankilany, ka samy mifampiampanga.
Hatramin'izao fotoana izao, tsy mbola nahita soritra fitondrantena mendrika na fanaovana marimaritra iraisana aho, na avy amin'ny andaniny na avy amin'ny ankilany, mbola samy miezaka toy ny hoe hahazo loka izany ry zareo, telo taona mahery aty aorian'ny nisian'ny disadisa.
Tena mahasadaikatra ho an'io mpandinika iray io ilay izy (izay nahatakatra ny fitarainana tena misy avy amin'ny roa tonta).
Na teo aza ireo fifandonana mihoson-drà teo amin'ny mpanao fihetsiketsehana sy ny miaramila, maro ihany ireo faritra nijanona tanaty filaminana tao Bangkok. Hoy ny tsikaritr'i Bangkok Pastor :
Tsy nilaza aho hoe tsy betsaka ny Lobaka Mena ary tsy milaza koa hoe tsy mahatonga olana be ry zareo, ary mety tsy hahatonga fiovana governemanta izy ireo. Fa hoy aho hoe, tsy misy na lobaka mena, tsy misy na hery mitam-piadiana, na koa tanky ny aty amin'ny faritra misy anay. Raha tsy nijery vaovao aho tsy nahita akory ny zava-misy.
Loharanom-baovao tsara ny Twitter raha mikasika ny zava-mitranga ao Thailandy ankehitriny. Ao amin'io sehatra io, no maneho ny heviny ny mponina mikasika ny krizy politika ao Bangkok :
DanDepew: Ambenan'ny “Mpiambina tsotra” izay manana mpanome vaovao henjana ny tobin'ireo Lobaka Mena. Mbola mibahana ny sampanan-dalàna ireo fiara fitanterambahoaka nodoran'ny olona. Ilay vondrona vaovaon'ireo “Lobaka Mainty” kosa moa miandany amin'ny miaramila.
pongsathorn: Tena mampalahelo,n amono olona iray ny Lobaka Mena teto, ora iray lasa izay.
tuangd: tsy vanona ny Lobaka Mena, potehanareo ny firenenay .
iamopen: Misy fiara mirehitra eo an-tsampanan-dalàna Victory Monument, tazako eto am-baravarankely ny setroka. Mizotra ho any Phya Thai ireo Lobaka Mena
JediPimmy: barbariana ireo Lobaka Mena ireo, maharikoriko.fahafahambaraka re izao ho an'ny Thailandy!!
Sarikely nampiasaina : kaonty Flickr an'i Candice sy jarrett